février 2016 – filazantsaramada
HATRAIZA NY FAHARETANA?
« Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao: tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanani-vavy tamin’izay ora izay » Matio 15:28 Sedra maro no nihatra tamin’ity ramatoa ity ny amin’ny ahazoan’ny zanany vavy ny fanasitranana. « Mamindrà fo amiko, Tompoko, zanak’i Davida ô! Ny zanako vavy ampahorian’ny demonia loatra! – Tsy namaly […]
Publié parfilazantsaramada février 26, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur HATRAIZA NY FAHARETANA?
Felana, mpiara-miasa an-tsitrapo feno faharisihana Felana, dia tanora mpampianatra ao amin’ny ‘Lycée’m-panjakana sy ny ‘Lycée’ Fanazava, ao amin’ny Kaomina Anjepy. Tsapany ny maha zava-dehibe ny fitoriana ny Filazantsara any an-tsekoly, koa dia nirotsaka ho mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF), miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI), nanomboka ny volana Novambra 2015 ao amin’ireo Lycée […]
Publié parfilazantsaramada février 25, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fanitarana fiaraha-miasa
IZAY AN’ANDRIAMANITRA DIA AN’NY ZANANY!
» Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan’Andriamanitra. » IIKorintiana 6: 1 Ny teny malagasy dia manankarena; ny teny hoe foana dia entina milaza hoe « mandrakariva », hanambaràna fotoana. Ny hevitra iray koa dia ny hoe « tsy misy » na fahafoanana. Ny teny eto amin’ity II Kor 6:1 ity dia ity […]
Publié parfilazantsaramada février 19, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IZAY AN’ANDRIAMANITRA DIA AN’NY ZANANY!
“Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy…” Apokalypsy 3: 10 Taorian’ny fiarahabana nahatratrarana ny taona vaovao 2016 dia maro ireo mpiara-miasa an-tsitrapo maniry ny hanamafisana hatrany ny fanentanana entin’ny Feon’ny Filazantsara ho an’ireo Kristiana ao amin’ny Fiangonana misy azy mba hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Anisan’izany […]
Publié parfilazantsaramada février 19, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Famangiana Fiangonana
AMPAHEREZONAREO NY TANANA MIRAVIRAVY!
« Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin’Andriamanitra, » I Petera 3:18a Mahagaga ny asan’ny tenin’Andriamanitra izay nirahin’Andriamanitra hanao izay ampanaoviny azy ety an-tany ka tsy miverina Aminy foana raha tsy mahatanteraka izany. Raha ny amin’i Kristy Jesosy dia nihatra tamin’ny ainy […]
Publié parfilazantsaramada février 12, 2016 février 15, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur AMPAHEREZONAREO NY TANANA MIRAVIRAVY!
Fomba vaovao no nentina nanentana ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra Tiana hatrany ny mampahatsiahy fa efa ho an-taonany maro no nisian’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana raha ny lafiny fanabeazana ara-panahy no resahina. Maro noho izany ireo mpianatra mianatra ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI). Na izany […]
Publié parfilazantsaramada février 11, 2016 février 11, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Lycée Nanisana
TENIN’ANDRIAMANITRA: VOA AFAFY TOKONY HITOMBO!
« Fa ireo teny amin’ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin’ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana. » Lioka 8:15 Fantatsika fa ny hatsaran’ny tany dia zava-dehibe tokoa amin’ny fanirian’ny zava-boahary, fa ny tany hay dia tsy misy zava-maniry firy. Ny tany ampy hamandoana kosa dia maintso daholo […]
Publié parfilazantsaramada février 5, 2016 février 5, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TENIN’ANDRIAMANITRA: VOA AFAFY TOKONY HITOMBO!
Fifaninanana krismasy 2015
“Ny fihavian’I Kristy” Toy ny tamin’ny taon-dasa, ho fankalazàna ny krismasy 2015 dia nanatanteraka “Fifaninanana Krismasy” ny Feon’ny Filazantsara nandritry ny volana Desambra. Tao anatin’ilay fandaharana “Henoy ny feony” izay vokariny sy alefany isan-kerinandro amin’ny fampielezam-peo valo manerana ny Nosy no nanatanterahana izany, dia Antananarivo: Radio RTF 91.2 FM, Radio ACEEM 103.4 FM; Antsirabe: Radio […]
Publié parfilazantsaramada février 4, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fifaninanana krismasy 2015